Banaanbax xoogan oo Maanta ka dhacay Beledweyne+ Sawirro - Awdinle Online
Banaanbax xoogan oo Maanta ka dhacay Beledweyne+ Sawirro
Banaanbaxaan ayaa waxa dhigay qaar kamid ah Bulshada ku nool Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, iyaga oo uga soo horjeeday Maamulka Cusub ee dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle.
Banaanbaxayaasha ayaa badankood waxa ay isugu soo baxeen Xaafada Xaawa-Taako ee Magaalada Beledweyne, iyaga qarkood dhagxaan iyo taayaro ay gubeen ku jaray wadada lamiga ah.
Dad Banaanbaxa dhigay oo u badan Haween iyo Dhalinayro ayaa waxaa ay ku dhawaaqayeen Erayo ay kamid yihiin Hir-Shabeelle dooni meyno iyo Cadaalad ayaan rabnaa.
Sidoo kale banaanbaxayaasha ayaa waxaa ay kasoo horjeedaan xukun la sheegay in la doonayo in lagu rido dad dhawaan Booliska Hir-Shabelle ay xir xireen oo qaarkood taageero u ah Janeraal xuud, kuwaas oo horboodayay banaanbaxyadii ka dhacay Magaalada Beledweyne.
Qaar kamid ah Banaanbaxayaasha ayaa waxaa ay ka dalbadeen Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle inay si deg deg ah xorriyadooda u siiyaan dadka u xiran, waxaana dadkaasi kamid ah Wariye hore Cali Daahir Xeroow iyo Afhayeenka Jabhadda Janeraal Xuud.
Xaalada Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa hareeyay banaanbaxyo tan iyo markii Magaalada Jowhar lagu doortay Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo doorashadaas Bulshada Beledweyne ay kasoo horjeesteen.
Previous articleMahdi Guuleed oo raali-gelin ka bixiyay hadal xiisad abuuray
Next articleGuddoomiye Mursal oo sheegay waxa dhacaya marka lagaaro 8-February iyo Xasan Sheekh oo ka jawaabay